Potes Cantabria, isi obodo nke mara mma mpaghara Liébana | Akụkọ Njem
Louis Martinez | | Spain obodo
Potes, Cantabria, bụ ebe a na-amaghị nke ọma mana ọmarịcha njem nleta. Ọ dị na etiti Mpaghara Liébana, n'okpuru ụkwụ ugwu ndị Nkume dị nsọ y Akara Labra na otu aka na massif nke Ugwu Europe nye onye ozo. Ọ bụ kpọmkwem na nke ikpeazụ na Osimiri Quiviesa, nke na-asọba na Deva na elu nke obodo ahụ.
Ma, n’elu ihe niile, Potes bụ obere ụlọ mara mma cobbled na warara n'okporo ámá ruru si n'ụsọ oké osimiri site ikpọ Ugwu Hermida. O nwere ọtụtụ ihe ncheta na, dị ka a ga - asị na ihe a niile ezughi, yana gastronomy pụrụ iche ma sie ike. Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịmata Pootu, na Cantabria, anyị na-akwado gị ka ị soro anyị na njem anyị.
1 Ihe ị ga-ahụ na Potes, Cantabria
1.1 Chọọchị San Vicente
1.2 The Torre del Infantado, akara nke Potes
1.3 Ihe ncheta ndị ọzọ nke Potes, Cantabria
2 Ihe ị ga-ahụ ma mee na gburugburu Potes
2.1 Ebe obibi ndị mọnk nke Santo Toribio de Liébana
2.2 Fuente Dé, echiche USB na ụzọ ugwu
3 Ihe ị ga-eri na Potes
4 Uzo esi aga na Potes, Cantabria
Ihe ị ga-ahụ na Potes, Cantabria
Obodo Liébana niile nwere ịma mma mara mma na ihe ncheta dị ebube. Ọtụtụ n'ime ndị nke ikpeazụ na-etinye uche na Potes na, na gburugburu ya, bụkwa akụkụ dị mma nke mbụ. Ka anyị matakwuo ihe ndị a niile.
Chọọchị San Vicente
Kwusara Ihe ncheta nka nke ihe omuma, chọọchị a mara mma na-azaghachi ụdị ụkpụrụ ụlọ dị iche iche. Nke a bụ n'ihi na e wuru ya n'etiti narị afọ nke iri na anọ na nke iri na asatọ. Maka nke a, ụdị ya sitere na Gothic ruo Renaissance na Baroque.
N'èzí, ị ga-eti site na mgbịrịgba elu, mgbe, n’ime, ị pụrụ ịhụ navụ abụọ e kewara ekewa n’akụkụ nke ebe a kpụkọrọ akpụkọ. Otu nnukwu ụlọ ụka anọpụrụ iche na nke gara aga site na nnukwu mmeri na sacristy mezue ihe mgbagwoju anya.
The Torre del Infantado, akara nke Potes
Ihe mgbidi a nke ezinụlọ Lama wuru na narị afọ nke XNUMX, bụ nke Tello nke Castile, eyeneka Edidem Henry II. Ma ọdịdị ya ugbu a bụ n'ihi mgbanwe nke ndị ọrụ nyere Duke nke Infantado na XVI. Ọ bụ ya mere ọ ga - eji dị ka Lọ nnukwu ụlọ Italian yitere nnọọ ndị ọzọ oge ahụ.
Ekwuwaala Akụ nke Mmasị Omenala ma ugbu a ọ raara nye ihe ngosi. Dịka akụkọ akụkọ, anyị ga-agwa gị na ọ bụ nke igogo López de Mendoza, ndị ama ama Marquis nke Santillana, onye a na-ahụta ka otu n’ime ndị nnukwute Spanish ochie.
Ihe ncheta ndị ọzọ nke Potes, Cantabria
Abụọ ndị bu ụzọ bụ ihe ncheta kachasị mma nke Potes. Ma enwere ndị ọzọ na-atọkwa ụtọ. I nwekwara ike ịga na hermitages nke La Nwa agbọghọ nke Valmayor na nke Nwa agbọghọ nke Wayzọ.
Ọzọkwa, na nso Torre del Infantado ị nwere ụlọ ndị ọzọ dị ka nnukwu ụlọ dịka nke Ntị Lama, Okwuchi, Calseco y osorio. Ma kwụsịtụ ile anya na nke ochie ha àkwà mmiri dị ka nke San Cayetano na Plọ Mkpọrọ. Ma kwa, Potes niile mara mma. Na-eje ije na Obodo Solana, tinyere okporo ụzọ ya ndị e jikọtara ọnụ na ụlọ ochie iji gosipụta ya.
Ihe ị ga-ahụ ma mee na gburugburu Potes
Ọ ga-abụ mmehie ịga Potes ma ọ maghịkwa gburugburu ya. N'ihi na, ọ bụrụ na obodo Lebaniega mara mma, ọ ga-adị mma karịa. eke etiti. Ọbụghị naanị nke ahụ, enwekwara ezigbo ihe nketa nke ebe ncheta dị nso na Potes, nke a na-etinye ya ebe obibi ndị mọnk nke Santo Toribio de Liébana.
Towerlọ elu Infantado
Ebe obibi ndị mọnk nke Santo Toribio de Liébana
Ga-ahụ ebe obibi ndị mọnk Franciscan a nke obodo Chameleno, n'ime mpaghara Liébana n'onwe ya. Ejiri ntọala ya sitere na bishọp Palencia aha ya Toribio onye dịrị ndụ na narị afọ nke isii. Agbanyeghị, ọ ga - abụ Toribio ọzọ, nke a sitere na IV, onye ga - enye ya aha ahụ mgbe ebugharị ozu ya ebe ahụ.
Otú ọ dị, onye kasị biri na ya bi bụ ihe a na-akpọ Beatus nke Liebana, onye dere akwụkwọ ya n'ime ya ma were ya dịka otu n'ime ndị ọgụgụ isi nke oge ya, na ogo nke mmadụ dịka Alcuino nke York.
Mostlọ kachasị mkpa n'ụlọ obibi ndị mọnk bụ ụka, nke jikọtara ụdị Romanesque na Gothic. Otu n'ime ya ụlọ arụsị, nke bụ Baroque, ụlọ ndị Lignum Crucis. Aha a ka e nyere relic nke obe ebe akpọgidere Jisos Kraist n'obe. Na mgbakwunye, na Ọnụ ụzọ mgbaghara, nke na-emepe afọ jubilii ọ bụla iji nabata ndị njem ala nsọ.
N'aka nke ọzọ, na-esote ebe obibi ndị mọnk ị nwere ike ịga na Ọgba dị nsọ, ụdị ụlọ ewu ewu tupu Romanesque nke malitere na narị afọ nke iri na ọ na-akawanye njọ ugbu a. Ekwenyere na ọ bụ ebe onye guzobere ebe obibi ndị mọnk ahụ lara ezumike nká.
Fuente Dé, echiche USB na ụzọ ugwu
Ọzọ nleta anyị na-adụ gị ọdụ ka ị gaa na gburugburu Potes bụ nke Isi mmalite nke. N'ime obere obodo a, ị ga - ewererịrị ọchị nke na-enye gị nnukwu echiche nke Picos de Europa na nke ahụ ruru Ele USB. Ọ na-agafe nkwụsị nke ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ narị mita asatọ ọ na-esiri ike iji nkeji anọ rute elu nke 1847.
Fuente Dé ụgbọ ala ụgbọ ala
Ozugbo elu, ị nwekwara ike ịhụ ọmarịcha ala. Ma, na mgbakwunye, ọ bụ ebube tonweta Central massif nke Picos de Europa n'onwe ha, ebe ị nwere ike ịme ụzọ ụkwụ dị egwu. Dịka ọmụmaatụ, nke na-agbago Alto de la Triguera, nke Ázọ Áliva, nke Osimiri Jedunda ma ọ bụ circuit gburugburu Peña Remoña.
Ihe ị ga-eri na Potes
Dị ka anyị gwara gị na mbụ, Potes na-enyekwa gị gastronomy dị ike ma na-atọ ụtọ. Ihe lebaniego stew, nke ejiri chickpeas, collards, poteto na omenala mee soso anụ ezi (chorizo, soseji ọbara, anụ ezi na ham). N'ikpeazụ, a na-agbakwunye anụ ehi na nri, achịcha achicha mgwakota agwa, chorizo, akwa na pasili.
Na efere a, ị nwere ihe karịrị maka ezigbo nri. Ma ị nwekwara ike ịnwale agha ma ọ bụ salmon nke osimiri Deva na desserts dị ka a na-akpọ chiiz si Liébana ma ọ bụ Picón na Tresviso chiiz.
Iji wedata ụdị nri dị otú ahụ, ọ dịghị ihe dị mma karịa pomace obodo, mara mma nke na ọ nwere nnọkọ nke ya. Ọ na-ewe izu ụka nke abụọ nke Nọvemba ma kwupụta ya Mpaghara mmasị ndị njem nlegharị anya.
Uzo esi aga na Potes, Cantabria
Nanị ụzọ ị ga-esi ruo Lebaniega bụ site na okporo ụzọ. Enwere ụgbọ ala na-eme njem ahụ, mana anyị na-adụ gị ọdụ ka ị jiri ụgbọ ala gị, jee ije gị. Ọ bụrụ na ị na-eme njem site n’ebe ugwu, ị ga-ahapụrịrị A-8 na elu nke Unquera iwere N-621 na, dị ka anyị gwara gị, na-aga site na ịrịba ama Ugwu Hermida ọ na-ewega gị ozugbo na Potes.
Kama, site na ndịda ị nwere ike ịga njem na A-67. Ma ụzọ kachasị nso bụ N-625 site León na elu Riano ma werezie N-621 n'akụkụ Castilian.
Na mmechi, Potes, na Cantabria, bụ a ụlọ mara mma mara mma jupụtara n'ihe ncheta na gburugburu nrọ. Ọ bụrụ n ’ihe a niile ị gbakwunye nri ya na-atọ ụtọ, ị nwere ihe niile iji kpebie ịmata ya. Ọ naghị adị gị ka ị na-eme ya?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Spain obodo » Egwuregwu, Cantabria